Dhamaan Dadka Afrikaanka Ah Oo Hadda Waxii Ka Danbeeya Dal Ku Gal (Visa) La’aan Ku Gali Kara Dalka Kenya – Heemaal News Network
Kenya ayaa dhammaan xuduudaheeda u furtay muwaadiniinta Afrika inay waddankaasi iman karaan fiisana ay ka heli karaan garoomada ay kasoo galayaan.
Tallaabadaan ayaa ka dambaysay markii dhowaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ka sheegay xafladdii dhaartiissa in Kenya ay u furan tahay dadka Afrikaanka ah.
Guddoomiyaha degmada Kilifi ee dalka Kenya Magu Mutindika, ayaa sheegay in laamaha ammaanku ay haweeney 44 jir ah oo lagu magacaabo, Saidia Matani ku qabteen magaalada, shaley gelinkii dambe kaddib markii ay diidday in la […]
November 18, 2017 Caalamka
Xaalada magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa degan kaddib rabshado dad ay ku dhinteen oo maalintii shalay ka dhacay xili uu halkaa dib ugu laabtay hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka dalkaas Raila Odinga. Rabashadaha ayaa bilaawday […]
Kenya Oo Feejignaan Gelisay Ciidamadeeda Inta Lagu Jiro Maalmaha Ciida Masiixiga.
Dowladda Kenya ayaa feejignaan sare gelisay Ciidamadeeda, inta lagu jiro maalmaha ciida masiixiga ah, iyadoo dhaq dhaqaaq amni laga dareemay magaalooyinka ku dhow xuduuda Soomaaliya. Warbaahinta Kenya ayaa ku warantay in saraakiisha ammaanka ay ka […]